काठमाडौं, १७ असार । कूटनीतिज्ञ लोकराज बरालले नेताहरुको उत्ताउलो पाराले मुलुकको हित नहुने बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि
काठमाडौं, १७ असार । जनता समाजवादी पार्टीका नेता युवराज कार्कीले बाबुराम भट्टराईको राजनीति सकिएको दाबी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग
जसपा सांसद अमृता अग्रहरि उपेन्द्र यादव कि बाबुराम भट्टराईतिर ?
काठमाडौं, १७ असार । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की नेतृ एवं सांसद अमृता अग्रहरिले पार्टी नफुटेको दाबी गरेकी छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि
गुरुराज घिमिरेलाई धमलाको प्रश्नः “देउवाविरुद्ध मोर्चाबन्दी किन ?”
काठमाडौं, १७ असार । नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले पार्टीको विधान र परम्परा मिचेर एकलौटी नगर्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली
रेनु दाहालसँग के सिक्न पार्टी एकता गर्ने ? खुमलटारे महाराजबाट वैज्ञानिक समाजवाद आउँदैनः गोपाल किराती
काठमाडौं, १६ असार । माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष गोपाल किरातीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग पार्टी एकता गर्नुको औचित्य नभएको बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन)
काठमाडौं, १६ असार । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले अत्यावश्यक काममा बाहेक कार्यालयमा भीडभाड नगर्न आह्वान गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का
सधैंको झ्याङझ्याङ गर्नुभन्दा आआफ्नो बाटो लिनुपर्छ भन्ने मत पनि छः जसपा नेता
काठमाडौं, १६ असार । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता डम्बर खतिवडाले पार्टी विभाजनको डिलमा रहेको बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको कुनै अर्थ र औचित्य छैनः देव गुरुङ
काठमाडौं, १६ असार । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देव गुरुङले ५ दलीय गठबन्धनको भविष्य नेपाली कांग्रेस परराष्ट्रनीतिमा निर्भर हुने बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली
काठमाडौं, १५ असार । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव डा. वेदुराम भुसालले नेकपा एमालेसँग सहकार्य वा वार्ताका लागि कुनै सर्त नराखेको बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम
निवर्तमान मन्त्री विरोध खतिवडा भन्छन्ः “१२ घण्टा पर्खिएको भए म हाँसीखुसी मन्त्रालयबाट बिदा हुन्थें”
काठमाडौं, १४ असार । निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले पार्टीभित्रकै केही नेताहरुले अनेक अफवाह फैलाएको आरोप लगाएका छन् । प्राइम एचडी टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग हिजो
गठबन्धनका जिम्मेवार नेता र मन्त्री नै निर्वाचनबाट भाग्ने बहाना खोजिरहेका छन्ः रमेश लेखक
काठमाडौं, १४ असार । नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले कुनै पनि हालतमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन टार्न नमिल्ने बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि